Akụkọ - Ngwa ngwa ngwa ngwa
Anyị niile maara na uto nke ihe ọkụkụ chọrọ mmiri na nri. Ọdịnaya nke mmiri na nri ndị dị na ala na-emetụta uto nke ahịhịa. Mgbe nri ala dị oke oke, ọ ga-etolite oke nri nri osisi, na-ebute mmụba nke nri ala na nguzo nke mmetọ ala. Mgbe nri ala dị oke ala, ọ gaghị erute ọdịnaya edozi achọrọ maka uto nke osisi, na-emetụta uto nkịtị nke ahịhịa, Ya mere, naanị nri ndị kwesịrị ekwesị ala ga-enyere aka na uto nke ahịhịa.
Fertilization nke ọma nwere ike meziwanye uru nke mkpụrụ osisi wee belata ojiji nke fatịlaịza ọnụ. Ngwakọta ngwa ngwa ngwa ngwa ala bụ ngwa nyocha ọkachamara, nke nwere ike ịchọpụta ngwa ngwa fatịlaịza ma nyere anyị aka itinye fatịlaịza n'ụzọ ezi uche dị na ya. Mkparịta ụka ahụ na-egosi na nri ụlọ na-enye aka na nchịkọta nri, na nri nsị bụ naanị otu ụzọ n'ụzọ ise nke nri nri ụlọ, yabụ nri ụlọ ka mma, Na ebe ịta nri nkịtị ga-emeziwanye.
Ntinye nke ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa nwere ike ịghọta echiche sayensị nke ịlele ala na fatịlaịza. Yabụ, ịtụ ala na fatịlaịza bụ iji belata ibu ma bulie arụmọrụ. Nzọụkwụ mbụ iji tinye fatịlaịza n'ụzọ ezi uche dị na ya bụ ịlele ala, yana ịlele ala ziri ezi dị ezigbo mkpa. Ọ bụrụ na ejiri ihe ntinye nke akụrụngwa na-ezighi ezi, ọ bụghị naanị mmetụta nke ịba ụba na-aba ụba enweghị ike ị nweta, mana nsonaazụ nke mbenata mkpụrụ nwere ike ibute site na itinye fatịlaịza na-enweghị ezi uche, Ngwa a bụ ngwa ọrụ eji eme ihe iji chọpụta nri ala , site na iji akụrụngwa nwere ike ịba uru iji nweta ozi ala, iji nye ihe ndabere dị mkpa maka fatịlaịza sayensị.
Ojiji nke ihe eji eme ihe ngwa ngwa iji choputa ihe ndi ozo nwere ike inye ndi oru ugbo ihe omumu nke ndi oru ugbo ka ha mejuputa ngwa nri, meziwanye onu ogwu, belata ngwa nri na oru ugbo, meziwanye oru nke ala, weghachite ogo nke ala, ma belata mmetọ mmepụta ihe ubi, Ọ na-arụ ọrụ dị oke mkpa iji melite uru mmepụta na ogo nke ihe ọkụkụ na ichedo gburugburu ebe obibi nke ọrụ ugbo.